▷ Black Friday - Apple Watch တွင် အကောင်းဆုံး ရောင်းအား | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignatius ခန်းမ | 27/11/2021 08:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 27/11/2021 10:20 | Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
နိုဝင်ဘာလ 26 ရက်နေ့ကို Black Friday သည် တစ်နှစ်တာ၏ အကောင်းဆုံးနေ့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရစ်စမတ်ဈေးဝယ်ထွက်လာ. အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ Apple Watch အဟောင်းကို သက်တမ်းတိုးရန် သို့မဟုတ် သင်၏ ပထမဆုံး Apple Watch ကို ဝယ်ယူရန် စီစဉ်ထားပါက၊ Black Friday သည် ၎င်းကို ပြုလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်သောကြောင့် ခရစ္စမတ်ကာလ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ စျေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ကမ်းလှမ်းမှုကို ရရှိရန် လက်တွေ့တွင် မဖြစ်နိုင်ပေ။
ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ပင် Black Friday သည် တစ်ရက်တည်းသာ ကြာမြင့်မည်မဟုတ်ပေ။ ယခင်ရက်များအတွင်း သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်သည်။၊ ပထမကမ်းလှမ်းချက်များသည် နိုဝင်ဘာလ 22 ရက်နေ့တွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ 29 ရက်နေ့တွင် Black Friday ဖြင့် ပြီးဆုံးပါမည်။ အရေးကြီးဆုံးနေ့သည် Black Friday တရားဝင်ကျင်းပသည့် 26 ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သည်။
1 Apple Watch မော်ဒယ်များကို Black Friday တွင် ရောင်းချမည် ဖြစ်သည်။
1.1 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စီးရီး 6
1.2 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အရှေ့တောင်
1.3 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စီးရီး 3
1.4 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စီးရီး 7
2 Black Friday မှာ Apple Watch ကို ဘာကြောင့် ဝယ်ရကျိုးနပ်တာလဲ။
3 Black Friday တွင် Apple Watch မည်မျှလျှော့လေ့ရှိသနည်း။
4 Apple Watch မှာ Black Friday ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
5 Black Friday ကာလအတွင်း Apple Watch တွင် အပေးအယူများ ရှာဖွေရမည့်နေရာ
Apple Watch မော်ဒယ်များကို Black Friday တွင် ရောင်းချမည် ဖြစ်သည်။
Apple Watch Series6GPS၊...
Series6သည် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရနိုင်သောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများ ယနေ့ Apple Watch ကိုဝယ်လိုပါက။ Apple Watch Series7နှင့် တစ်ခုတည်းသော ကွာခြားချက်မှာ အပိုလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ မထည့်ဘဲ ဤမော်ဒယ်အသစ်တွင် ပိုကြီးသော စခရင်အရွယ်အစား ပါရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
Series7ကို မိတ်ဆက်လိုက်သည်နှင့်အမျှ၊ Series6သည် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသောကြောင့်သာမက၊ ၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချခဲ့သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် Series7၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို လက်လွတ်မခံရတော့ပါ။
Apple အတွက် အားသွင်းကိရိယာ...
စျေးကွက်တွင်တစ်နှစ်အတွင်း Apple Watch SE မော်ဒယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား မပေးပါ။ Series6မှာ တွေ့နိုင်ပေမယ့် Series3ထက် ပိုကြီးတဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ ဒီဇိုင်းဆိုရင်တော့
ဤမော်ဒယ်ကို ကမ်းလှမ်းမှုများတွင် အများအားဖြင့် တွေ့နိုင်သောကြောင့်၊ Black Friday အခမ်းအနားအတွင်း ပျောက်ဆုံးမည်မဟုတ်ပါ။.
အသက်အကြီးဆုံး Apple Watch မော်ဒယ်ဖြစ်ပေမဲ့၊ စက်တင်ဘာလ 2017 တွင်စတင်ခဲ့သည်။Apple သည် Series7နှင့် Apple Watch SE တို့နှင့်အတူ ဤစက်ပစ္စည်းကို ဆက်လက်ရောင်းချခဲ့သည်။
ဈေးကွက်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရင် ဒီမော်ဒယ်မှာ ရှာရခက်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစျေးနှုန်းထက် ပို38 နှင့် 42 မီလီမီတာဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံး။
Apple Watch Series7သည် စျေးကွက်တွင် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာရောက်ရှိခဲ့သည့် Apple Watch ၏ မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သည်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Black Friday အခမ်းအနားအတွင်း ယခင်မျိုးဆက်နှင့် အပိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသော ဤမော်ဒယ်အသစ်၏ ကမ်းလှမ်းချက်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရပါသည်။
Black Friday မှာ Apple Watch ကို ဘာကြောင့် ဝယ်ရကျိုးနပ်တာလဲ။
Apple Watch တစ်လုံးဝယ်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်သည် Black Friday တွင် မှားမည်ကို မကြောက်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ အတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Black Friday နဲ့ Christmas အတွင်းမှာရော၊ ကုမ္ပဏီအများစုသည် စတော့ရှယ်ယာများကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားကြသည်။ စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ပြီးဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ရောက်ရှိလာတော့မည့် မော်ဒယ်အသစ်များအတွက် နေရာယူရန် ထုတ်ကုန်ဟောင်းများရှိသည်။
ထို့အပြင်၊ ဤအခမ်းအနားသည် တာဝန်ကျ Apple Watch အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သောကြောင့် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ယခင်မျိုးဆက်များ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကမ်းလှမ်းချက်များကို ရှာဖွေပါ။. အကယ်၍ သင်သည် Apple Watch ကိုဝယ်လိုပါက သင့်ကိုယ်သင် မပြောဘဲ၊ ၎င်းကို ပြုလုပ်ရန် ရက်အနည်းငယ် ကျန်သေးသည်။
Black Friday တွင် Apple Watch မည်မျှလျှော့လေ့ရှိသနည်း။
iPhone 13 အမျိုးအစား၊ iPad mini နှင့် 7th မျိုးဆက် iPad ကဲ့သို့သော iPhone XNUMX အမျိုးအစား၊ iPad mini နှင့် XNUMXth မျိုးဆက် iPad ကဲ့သို့သော နောက်ဆုံးထွက် Apple Watch မော်ဒယ်၊ Series XNUMX ကို လျှော့စျေးအချို့ဖြင့် စျေးကွက်တွင် Apple မှ မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းက ရောင်းချပေးခဲ့သော အခြားထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင်၊ mission မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ Apple Watch Series6တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကမ်းလှမ်းချက်များကို ရှာဖွေပါ။Black Friday မတိုင်မီ သီတင်းပတ်များအတွင်း 15mm နှင့် 40mm ဗားရှင်းနှစ်မျိုးစလုံးတွင် 44% အထိ လျှော့စျေးဖြင့် ၎င်းကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Apple Watch SE ကို Apple မှတဆင့်တရားဝင်ရောင်းချနေသေးသော်လည်း လက်တွေ့အားဖြင့် စတင်ရောင်းချချိန်မှစ၍ ၎င်းကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်ခဲ့သည်။ Amazon တွင်တရားဝင် Apple မှအနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း7 နှင့် 12% အကြားလျှော့စျေးနှင့်အတူ။
Apple Watch Series3နှင့် ပတ်သက်၍ ဈေးကွက်တွင်4နှစ် ပြီးမြောက်ခဲ့သော မော်ဒယ်လ် သည် m ဖြစ်လိမ့်မည်။ယူရို 190 အောက်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။42mm ဗားရှင်းအတွက်၊ အားလုံးထဲမှာစျေးအကြီးဆုံး။
Apple Watch မှာ Black Friday ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ Black Friday ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပုံမှန်အတိုင်း တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး၏ ကမ်းလှမ်းချက်များကို ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။Apple Watch တစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ပါဘူး။
သို့သော် ကုမ္ပဏီအများစု အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းချက်များကို 26 ရက်အတွက်သိမ်းဆည်းထားသည်။. အကယ်၍ သင်သည် Black Friday ကို အခွင့်ကောင်းယူရန် Apple Watch သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ရှာဖွေနေပါက Black Friday ကိုယ်တိုင်က ၎င်းကို တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Black Friday ကာလအတွင်း Apple Watch တွင် အပေးအယူများ ရှာဖွေရမည့်နေရာ
Apple သူမသည် လျှော့စျေးဖြင့် သူငယ်ချင်းမဖြစ်ဖူးပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Apple Watch အွန်လိုင်း Apple Store မှတဆင့် သို့မဟုတ် စပိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ Cupertino အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များတွင် Apple Watch ကို ဝယ်ယူရန် မမျှော်လင့်ပါနှင့်။
အာမခံနှင့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Amazon သည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် Apple ထုတ်ကုန်ကိုမဆို ဝယ်ယူသည့်အခါ အကောင်းဆုံးပလပ်ဖောင်းများApple Watch ၊ iPhone ၊ iPad ပဲဖြစ်ပါစေ...
Amazon တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်အထပ်ထပ်တန်ဖိုးရှိသော Apple ထုတ်ကုန်အားလုံး၏နောက်ကွယ်တွင် Apple ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Apple မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါ။
Mediamarkt တည်ထောင်မှုများအပြင် ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အေးမြသောပန်းသီးထုတ်ကုန်များApple Watch နှင့် iPhone အပါအဝင် အဓိကအားဖြင့်။
El Corte Inglés သည် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အဆောက်အအုံများစာရင်းကို လက်လွတ်မခံပါ။ Apple Watch ကိုဝယ်ပါ နှင့် အခြားမည်သည့် Apple ထုတ်ကုန်ကိုမဆို စိတ်ဝင်စားဖွယ်စျေးနှုန်းများထက် ပိုပေးသည်။
စမ်းကြည့်ချင်ရင် အရင်ကြည့် သင့် Apple Watch ကို စမ်းသပ်ပါ၊ ဆော့ပြီး ဆော့ပါ။ ၎င်းကိုမဝယ်မီ Apple ထုတ်ကုန်များ အထူးပြုစတိုးဆိုင် K-Tuin တွင် ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတွေပါလျှင် Apple Watch ကိုဝယ်ခြင်းဖြင့် ငွေကုန်သက်သာသည်။Apple ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် အထူးပြုသည့် ဝဘ်ဆိုဒ် Magnificos မှ အမျိုးသားများကို အခွင့်အရေးပေးသင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » အနက်ရောင်သောကြာပန်းသီးနာရီ
Mac တွင် Black Friday